Yintoni ongayifaka kwingxelo yegciwane?
Eyona Qa Kufuneka ubandakanye ntoni kwiNgxelo yeBug?
Ungayibhala njani ingxelo eyiBug efanelekileyo
Ukubhala isiphene esifanelekileyo okanye ingxelo yesiphene kuhamba ixesha elide ekuchongeni nasekusombululeni iingxaki ngokukhawuleza. Kule posi, sidwelise izinto eziqhelekileyo ezihlala zibandakanywa kwingxelo yegciwane.
Akukho myalelo uthile:
Isazisi esinesiphako, i-ID
Isichongi sibaluleke kakhulu ekubeni sikwazi ukubhekisa kwisiphene kwiingxelo. Ukuba isixhobo sokunika ingxelo sesiphene sisetyenziselwa ukufaka iziphene, i-ID idla ngokuba yinkqubo evelise inani elahlukileyo elonyusa ilog nganye yesiphene.
Isishwankathelo yinkcazo ephezulu yenqanaba lesiphene kunye nokusilela okubonakalayo. Esi sishwankathelo sifutshane kufuneka sibe kukuqaqanjelwa sisiphene njengoko yile nto abaphuhlisi okanye abavavanyi kuqala beyibona kwingxelo yegciwane.
Uhlobo lwesiphene kufuneka lubhalwe ngokucacileyo. Ukuba umphuhlisi ophonononga isiphene akanakuqonda kwaye akanako ukulandela iinkcukacha zesiphene, mhlawumbi ingxelo iya kubuyiselwa kumvavanyi acele inkcazo engakumbi kunye neenkcukacha ezingakumbi ezibangela ukulibaziseka ekulungiseni umba.
Inkcazo kufuneka ichaze ngokuthe ngqo amanyathelo aza kuthathwa ukuvelisa kwakhona isiphene, kunye nokuba zeziphi iziphumo ezilindelekileyo kwaye zithini iziphumo zenyathelo lovavanyo. Ingxelo kufuneka ichaze ukuba leliphi na inyathelo lokungaphumeleli eliqwalaselweyo.
Ubungqongqo besiphene bubonisa indlela esisiphene ngayo ngokonakalisa ezinye iinkqubo, amashishini, okusingqongileyo kunye nobomi babantu, kuxhomekeke kubume benkqubo yokwenza isicelo. Ubunzima buqhele ukubekwa ngokwendidi kwaye buhlelwe ngokwamanqanaba ama-4 okanye ama-5, kuxhomekeke kwinkcazo yombutho.
S1 - Kubalulekile: Oku kuthetha ukuba isiphene sisixhobo sokumisa esinomonakalo omkhulu onokubakho kwaye akukho ndawo yokusebenza ukuze kuthintelwe isiphene. Umzekelo kunokuba sisicelo esingasunguliyo kwaphela kwaye sibangele ukuba inkqubo yokusebenza ivale. Oku kufuna ingqwalaselo kwangoko kunye namanyathelo kunye nokulungiswa.
S2 - Inzima: Oku kuthetha ukuba ezinye zezinto eziphambili ezenziwayo zezicelo ezilahlekileyo okanye ezingasebenziyo kwaye akukho msebenzi usebenza. Umzekelo, usetyenziso lokujonga umfanekiso alunakufunda iifomati zemifanekiso eqhelekileyo.
S3 - Eqhelekileyo: Oku kuthetha ukuba ukusebenza okukhulu akusebenzi, kodwa, indawo yokusebenza inokusetyenziswa njengesisombululo sethutyana.
I-S4 -Uzimonyo / uPhuculo: Oku kuthetha ukuba ukusilela kubangela ukuphazamiseka kunye nokucaphukisa. Umzekelo unokuba kukho umyalezo ophumayo rhoqo kwimizuzu eli-15, okanye uhlala ucofa kabini kwiqhosha le-GUI ukwenza isenzo.
S5 - Ingcebiso: Oku asiqhelekanga isiphene kunye nengcebiso yokuphucula ukusebenza. Oku kunokuba yi-GUI okanye ukujonga ukhetho.
Nje ukuba ubungqongqo bumiselwe, okulandelayo kukubona indlela yokusibeka phambili isigqibo. Into ephambili emisela ukuba isiphako kufuneka silungiswe ngokukhawuleza kangakanani na. Izinto eziphambili ngokubaluleka zihlala zichaphazela ukubaluleka kweshishini njengempembelelo kwiprojekthi kunye nempumelelo enokubakho yemveliso kwindawo yentengiso. Njengobukhali, okuphambili kuye kwahlelwa kumanqanaba ama-4 okanye ama-5.
P1 - Ngxamisekileyo: Ithetha ukungxamiseka okukhulu kwaye ifuna isisombululo kwangoko
P2 - Ephakamileyo: Imfuneko yokusombulula ukukhutshwa kwangaphandle okulandelayo
P3 - Phakathi: Isigqibo esifunekayo kuthumelo lokuqala (kunako konke ukuthunyelwa)
P4 - Ephantsi: Isigqibo esifunwayo kuthumelo lokuqala okanye ukukhutshwa okuzayo kwexesha elizayo
Funda ngakumbi malunga nobunzima xa kuthelekiswa nokuPhambili
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isiphene esinobukhali obuphezulu sikwathwala okuphambili, okt isiphene esiqatha siya kufuna eyona nto iphambili ukusombulula umba ngokukhawuleza. Akunakuze kubekho ubukhali obuphezulu kunye nokusilela okuphambili. Nangona kunjalo, isiphene sinokuba nobunzima obuphantsi kodwa sibe nezinto eziphambili.
Umzekelo unokuba ligama lenkampani elipelwe kakubi kwiscreen sokuqaqamba njengoko kusungulwa isicelo. Oku akubangeli monakalo omkhulu kwindalo esingqongileyo okanye kubomi babantu, kodwa kunokuba nomonakalo kwisidima senkampani kwaye kungonakalisa inzuzo yeshishini.
Umhla kunye nexesha esenzeke ngalo isiphene okanye esixeliweyo kubalulekile. Oku kuhlala kuluncedo xa ufuna ukukhangela iziphene ezichongiweyo kukhululo oluthile lwesoftware okanye ukuqala kwesigaba sokuvavanya.
Inguqulelo kunye nokwakhiwa kweSoftware Phantsi kovavanyo
Oku kubaluleke kakhulu. Kwiimeko ezininzi, kukho iinguqulelo ezininzi zesoftware; Uhlobo ngalunye lunokulungiswa okuninzi kunye nokusebenza ngakumbi kunye nezixhasi kwiinguqulelo ezidlulileyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba loluphi uhlobo lwesoftware ebonise ukusilela esikwenzayo. Sisenokuhlala sibhekisa kolo hlobo lwesoftware ukuvelisa kwakhona ukusilela.
Kwakhona, oku kubalulekile, kuba ukuba sinokufuna ukubhekisa kumntu ophakamise isiphene, kufuneka sazi ukuba siqhakamshelane nabani.
Imfuneko enxulumene noko
Ngokusisiseko, onke amanqaku esicelo sesoftware anokulandelwa kwiimfuno ezahlukeneyo. Ke, xa ukusilela kujongwa, sinokubona ukuba yeyiphi imfuneko echaphazelekayo.
Oku kunokunceda ekunciphiseni okuphindiweyo kweengxelo zesiphene ekubeni sinokuthi sichonge imfuneko yomthombo, ukuba esinye isiphene singene ngenombolo yemfuno efanayo, akunakufuneka sizixele kwakhona, ukuba iziphene ziyafana.
Iziqhotyoshelweyo / Ubungqina
Nabuphi na ubungqina bokungaphumeleli kufuneka bufakwe kwaye bungeniswe nengxelo yesiphene. Le yinkcazo ebonakalayo yenkcazo yesiphene kwaye inceda umphononongi, umphuhlisi ukuba aqonde ngcono isiphene.
Kule nqaku sifunde ukuba loluphi ulwazi ekufuneka silubandakanye kwingxelo yegciwane. Ukudala ingxelo elungileyo yesiphene kukhawulezisa unobangela wohlalutyo kunye nokulungiswa kwebug.
yonyusa iselfowuni entsha
Eyona fowuni yaseTshayina elungiselelwe usa
Selenium Cofa kwikhonkco ngeXabiso le-href
I-AT & T isungula i-AT & T Navigator
I-Samsung Galaxy S21 Ultra kunye ne-iPhone 12 Pro Max
IAmazon & apos yexesha elifanelekileyo ukujongana neApple ngexabiso eliphantsi njenge- $ 199
Izivumelwano zeminyaka emibini kunye nokuthengwa kweefowuni ezixhaswayo zibuyile eSprint
Uphononongo lweVelodyne vLeve
Thatha i-Samsung Galaxy S8 yemozulu yewijethi ye-Galaxy S7 yakho